ISOFTWARE YOYILO LWESOLAR (YENKQUBO EZIPHAMBILI ZEPHOTOVOLTAIC) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Isoftware yoyilo lweSolar (yeNkqubo eziPhambili zePhotoVoltaic)
Nasi isikhokelo sethu kwisoftware yoyilo lwelanga kubandakanya izinto ezintle zokwenza inkqubo ye-photovoltaic yekhaya lakho. Amandla elanga okwenyuka kwekhaya ngokuthandwa, okuthetha ukuba iya isiba phambili ngakumbi kwiimpawu zayo kunye nokusetyenziswa kwayo. Uyilo lwelanga lusebenza ukwenza i-PV (inkqubo ye-photovoltaic) okanye isityalo selanga ukulungiselela urhwebo, umzi mveliso, okanye iigridi ezisekwe kwiprojekthi yelanga.
Iindawo zomtshato kwi-orange county ny
Ezona zinto zibalulekileyo kwiSoftware yoyilo lweSolar
Isoftware eDumileyo yoSolar
Isoftware yoyilo lweSolar Aurora
Isoftware yoyilo lweSeli yeHelioscope
I-SAM (Imodeli yoMcebisi ngeNkqubo)
Isoftware yeBlueSol PV
Isoftware yePVsyst Photovoltaic
Inkqubo ye-PVSOL Photovoltaic Design
Umzobo weSolar wePVC
Ukucaphula ukudala -Ukwenza isicatshulwa esikhawulezayo nesichanekileyo ukunika abathengi yenye yezona mpawu zibaluleke kakhulu kwisoftware enje. Ukwenza inkqubo ekhawulezayo nelula yenza ukuba umxhasi angafuni kujonga nakubani na.
Esi sicelo kufuneka sikwazi ukwenza uluhlu lweemveliso, ulwazi lofakelo, amaphepha edatha, izaphulelo, izikhuthazi, njl. Oku kwenza ukuba inkqubo iqhubeke kakuhle kwaye inike iqonga lokuthengisa elilula.
Ukusetyenziswa kweselfowuni -Wonke umntu usebenzisa i-smartphone kule mihla kwaye abantu bafuna ukubanakho ukufikelela kwisoftware ngokucofa iqhosha.
Ukukhetha isoftware ene-app iyanceda xa ukwisiza, okanye xa udibana nomntu ongenayo kwaye unolwazi kunye nemizekelo ezandleni zakho. Kubalulekile ukuba ujonge ukuba iyafumaneka na kwiifowuni kunye neetafile eziza kusetyenziswa kwindawo yomsebenzi ngabo nabakhi kunye nabafaki.
Uyilo lophahla -Abantu bathanda ukubonwa, kwaye uphahla oluninzi lukhethekile kubo. Ukuba nesakhono sokuzoba naluphi na uphahla kunye nokongeza uyilo lwepaneli yelanga kubo kufuneka ubenako. Ukwenza izinto ngokwesiko kuphahla ngalunye kunye nomthengi ekugqibeleni uyaphumelela kwintengiso.
Ukufakwa ngokusekwe kwilifu -Ukulayisha ngokusekwe ngamafu kuvumela ukusebenzisana ngokulula phakathi kwawo onke amacandelo ahlukeneyo kunye neziqwenga zeprojekthi. Inkqubo kufuneka ifikeleleke ngokulula kwiikhontraktha, abaphuhlisi, abaxhasi bezemali, abayili, abafaki, njl.
Ukuhlawula kunye nokukwazi ukwenza iBhanki -Uba umthengi uyihlawulela njani le nkqubo, emva kwesindululo kunye nokucaphula, ngaba umthengi angabhatalwa kwinkqubo enye okanye kukho enye inkqubo. Ngokuqhelekileyo kulula ukuba zonke zibe kwinkqubo enye.
Zininzi iinkqubo zesoftware kwintengiso, ezinye zingcono kunezinye kwaye ezinye ziyilelwe ngakumbi abanini makhaya kunye neekhontraktha zelanga.
Ukulandela uluhlu olufutshane lweempawu ezilapha ngasentla ukuze wazi ukuba ufuna ntoni kwaye ufuna ntoni kwinkqubo kunceda ukunciphisa isoftware esebenza ngcono kwimeko yakho nakwinkampani.
Kulungile ukuba uqaphele ukuba ayizizo zonke iisoftware ezisimahla, uninzi lwazo lufuna ubulungu, okanye lube neenguqulelo zelite ezinento yasimahla eneenguqulelo ezihlawulelweyo ezingaphezulu.
Ezinye zeenkqubo ezithandwayo zoyilo lwesoftware zingezantsi:
Inkqubo ye-Aurora yenziwa yi-Aurora Solar kwaye isetyenziselwa ukuthengisa kunye nokuhlala. Le software ivumela abasebenzisi ukubala ukuphuma kwamandla kwiinkqubo zabo besebenzisa i-injini yokulinganisa yokusebenza.
Ngesiseko esikhulu sedatha kunye neemowudi ezinokuthi zisetyenziswe kwisistim enkulu yeenkqubo.
I-Auroa iluncedo ekwenzeni imodeli ye-3D CAD yeepaneli zentengiso kunye nokuqikelela ukuba ingakanani na inkqubo ye-PV eya kuvelisa. Isoftware inokwamkela amaphepha alayishiwe ukwenza uyilo lwenkqubo ye-PV.
Ukongeza inokumisela ukuba zingaphi iipaneli zelanga ezifunekayo, ubungakanani beemifanekiso ezizikwere ezifunekayo kunye nokuba iya kusebenza kangakanani.
Solar Aurora - Indawo yewebhu
Ividiyo ngendlela yokusebenzisa isoftware yeAurora:
IHelioscope yisoftware yokuncedisa kwintengiso yemveliso yelanga, njengoko yenza iikowuti kunye nezindululo kubathengi. Isoftware ivavanya ukhetho lweenkqubo kwaye ithathela ingqalelo izinto ezinje nge-tilting, azimuth kunye neGCR.
U-donald uvuthela abafazi nabantwana
I-Helioscope kulula ukusebenzisana kunye nokwabelana ngolwazi kunye neekhontraktha, abavelisi, abathengi, njl.njl kuba isoftware esekwe kwilifu kunye nayo yonke ingcaciso yezemali kunye nezobuchwephesha ezinakho ukungeniswa kunye nokuthunyelwa kwelinye ilizwe njengoko kufuneka.
IHelioscope Solar - Indawo yewebhu
Ividiyo yoqeqesho lwe-Helioscope:
Le software isetyenziselwa ukuyila ii-microgrids ezihambisa iinkqubo zamandla. Iinkqubo zinokuyilwa zisebenzisa amandla ahlaziyekayo kunye nokuveliswa kwamandla okwenziwa kweefosili. Ukongeza iyakwazi ukubala iindleko ezinje ngepetroli, ulondolozo, izinto ezinokutshintsha kunye nenkunzi iyonke efunekayo.
I-HOMER yayiqale yadalwa kwiLebhu yeSizwe yaMandla aVuselelekayo eColorado, apho kamva ngo-2009 yayinelayisensi ku-HOMER. Igama lenkampani limela iHybrid Optimization yezixhobo ezininzi zamandla. Le software iphandwa rhoqo ngokuhlaziywa kwaye inguqulelo entsha ibizwa ngokuba yiHOMER Pro.
Amandla kaHomer - Indawo yewebhu
Uqeqesho oluhlaziyiweyo lwegridi yegridi yamandla:
I-SAM imfutshane kuMzekelo woMcebisi ngeNkqubo, yiyo kanye le nto isoftware iyenzayo, ibala ulwazi lweemetrikhi zombini kunye namanqanaba okusebenza kwezixhobo ezinokuphinda zenziwe ukucebisa ezona nkqubo zilungileyo.
Le nkqubo yenye yeenkqubo ezininzi eziphuhliswe kwi-NREL (iLebhu yeSizwe yaMandla aVuselelekayo), eColorado, kwaye isebenze kunye neYunivesithi yaseWisconsin's Solar Energy Lab kunye ne-Sandia Labs.
IYunivesithi yaseWisconsin ijolise ekusebenzeni kwiimodeli zamandla elanga, ngelixa uSandia Labs esebenza ngeemodeli ze-photovoltaic. I-SAM yokukhuphela simahla ngohlaziyo olutsha olukhutshwe ngo-2014.
SAM - Indawo yewebhu
Imodeli ye-SAM yokwenza isoftware yamandla ahlaziyekayo:
IBlueSol sisoftware eyenziwe nguMicrosoft, efikeleleka naphina emhlabeni. Inokubanakho ukungenisa i-DXF, i-DWG okanye iifayile zomfanekiso ukwenza ubume obuthathu.
Le software ithatha umsebenzisi ngamanqanaba oyilo, kuvavanyo nakwimveliso, ebhala yonke into apha endleleni.
Kukho iinguqulelo ezininzi ngokuxhomekeke ekusetyenzisweni, iBlueSol Express isetyenziselwa usetyenziso olukhawulezileyo, ngelixa inkqubo engaphezulu ifumaneka ngeBlueSol Design.
IBlueSol - Indawo yewebhu
Sebenzisa isoftware yoyilo lweBluesol yeenkqubo zevidiyo ye-photovoltaic:
I-Pvsyst ihlala isetyenziswa ngabaqulunqi ukuqikelela ukusebenza kweenkqubo ezithile kulungelelwaniso olwahlukileyo. Basebenzisa olo lwazi ukuvavanya iinkqubo ezifanelekileyo zokuvelisa amandla.
Ulwazi olukhutshiweyo lukwaluncedo kubaphuhlisi, abanini kunye nabaxhasi beprojekthi ukuqikelela ngokufanelekileyo ukuveliswa kwamandla kunye nayiphi na ingeniso abalindele ukuyibona.
I-calacatta quartz countertop
Isoftware ihlala ihlaziya, kwaye uhlaziyo olutsha luvumela abasebenzisi besoftware ukumodareyitha ukusebenza kweAmpt String Optimizers kwinkqubo enkulu yezinga kunye nezibonelelo ezinokuzinika.
IPvsyst - Indawo yewebhu
Ukudala iprojekthi yamandla elanga nge-PVsyst:
Njengomhla oboniswe ngegama, le software yenziwe kwiminyaka embalwa edlulileyo. I-PV * SOL yenziwe yiValentin Software.
Eyona ndlela ilungileyo yokususa ii-zits
Oku kuyilelwe ukubandakanya izinto zentengiso ezintsha, njengeemoto zombane, xa uqikelela ukusetyenziswa kwamandla.
Isoftware ivumela ukubalwa kwexabiso le-P90, ivumela abatyali mali ukuba babone iipesenti ezingama-90 zesivuno samandla kunye nalapho sinokudlula khona. Ukwenza oku isebenzisa imodeli yokudibanisa eyongezelelweyo yombane.
I-PVSOL - Indawo yewebhu
Ukwenza imodeli yelanga yokulinganisa kunye nesoftware yePVSOL:
I-PVComplete ihlala isetyenziswa ngabafakeli, iinjineli kunye nabaphuhlisi, ibavumela ukuba basebenzisane kwaye babelane ngolwazi kwindawo.
Kukho olunye ulwandiso olubizwa ngokuba yi-PVSketch tha olunokuthi lusetyenziswe ngummeli wentengiso ukunika umzobo weengcamango kunye namanqaku okudlulela kubaphuhlisi nakwiinjineli, ezenza umbono oqinisekileyo kunye nezicwangciso, ezithi emva koko zithunyelwe kubafaki.
PVC epheleleyo - Indawo yewebhu
Ividiyo ekusebenziseni isoftware yePVC yoyilo lwelanga:
Ukuba unamava okusebenzisa iinkqubo zesoftware yoyilo lwelanga okanye into oyithandayo, masazise kwizimvo ezingezantsi.
Izipho zekrisimesi zomfazi onayo yonke into
izimvo umhla ukuthandana isoka lakho
Iikeyiki zomtshato kunye neekhekhe
dillards umama womtshakazi
ivesi yebhayibhile yentsikelelo yomtshato